Ungachinja Sei Bhizinesi KuAkaundi Akaundi Pane Pinterest? ▷ ➡️ Vateveri ▷ ➡️
Dai 12, 2021 0 mashoko 498
Vanhu vazhinji vanosarudza chinja yako Pinterest account nekuda kwezvikonzero zvakasiyana zvinoita kuti ive yakanaka kwazvo nhasi. Nekudaro, nekutenda kune aya mhando yemamiriro ezvinhu zvinokwanisika kuti vanokupa zororo kana nongedzo nyowani kumafungiro avo anogona nezve mapurojekiti avanayo nhasi.
Kunyangwe zvingaite senge matanho mazhinji anodikanwa kuti uite bhizinesi feat uye kutamira kune yako wega account, hapana chaizvo izvo zvinoda kuitwa kuzadzikisa mukana iwoyo. Chinhu chega chekuisa mupfungwa ndechekuti chikuva chinoita ongororo chinja.
Pakaitika zvikonzero zvakasiyana siyana zvekuchinja, zvinokwanisika kuti iko kunonoka kwekambani kunogona kuchinja kana kutosara pakazorora kuti uwane mikana irinani yemabasa. Pasina kupokana, izano rakakwana kugara mukufungidzira uye wakadzikama kumirira zvinoitika nepuratifomu.
Ungachinja sei kubva kuaccount kuenda kubhizinesi kuenda kune wega paPinterest?
Sezvambotaurwa pamusoro, iyo bhizinesi account iri mukufarira kwayo kuti vanhu vanogona kubva vatora zvavanowana tsvaga mukati meplatform. Nekudaro, dzimwe nguva kutanga kwezvinhu zvekushambadzira zvinhu zvakawanda hazvishande uye izano rakanaka kuzvipa kuzorora kwakakodzera.
Kupa zvese izvi, zvinokwanisika kutanga kushandura zvinhu kugadzirisa mamiriro acho uye kutsvaga mhinduro inogona papeji. Ichave nguva yekuunza zvinhu kumusoro kuti zvisiyane zvirimo uye kuenderera nekukunda kwehuwandu.
Matanho ekuchinja account kubva kubhizinesi kuenda kune yako
Pinda muakaunzi yako yePinterest sezuva rakajairika
Iwe unofanirwa kuenda kurudyi rwepamusoro kuti usarudze sarudzo
Sarudza marongero mukati meiyo peji
Enda kumusoro kuruboshwe uye uwane marongero eakaunzi
Chinja iyo account kubva kubhizinesi kuenda kune yako wega
Ipapo iwe unofanirwa kugadzirisa zita reakaundi uye wotanga kugovera zvemukati
Kana iyo account yakave yakasimbiswa, zvinokwanisika kuti urambe uchinakidzwa nerubatsiro urwu. Ko kana uchifanira chengetedza mupfungwa ndeyekuti Pinterest ichaita ongororo yenguva dzose yezviri mukati kuti pasave nechinetso nekuda kwekubiridzira kana kuvharira peji.
Unogona here kudzokera kubhizimusi account paPinterest?
Kunyangwe ichiverengerwa seisina musoro mukana, kana zvichikwanisika kudzokera kuchikuva chebhizinesi mushure mekuita shanduko. Iwe unongofanirwa kutevedzera matanho ataurwa pamusoro.
Nekudaro, zano rakanaka rekudzivisa kutaura kusingaperi kana mibvunzo pasina chikonzero kubva kune vashandisi, ndeyekugovana katsamba ketsananguro. Mukati mawo zvinokwanisika kuti kujekeswa nezve zvakaitika zvakaitika.
Kutenda kune aya marudzi emamiriro ezvinhu, zvinokwanisika kuti hapana dambudziko nezve kugura kana kurasikirwa kwekugadzira. Tichifunga izvi, vashandisi vachatanga kuvimba zvakanyanya nezve kana mune izvo zvavari kuona kuvandudza zuva nezuva zvisati zvaitika zvinhu zvavanoona pasocial network uye ekutaurirana mapuratifomu.
1 Ungachinja sei kubva kuaccount kuenda kubhizinesi kuenda kune wega paPinterest?
1.1 Matanho ekuchinja account kubva kubhizinesi kuenda kune yako
2 Unogona here kudzokera kubhizimusi account paPinterest?